ဖိုးဖန် | Myanmar Mp3 Album
Home / Myanmar Artist / အဆိုတော် (ကျား) / ဖိုးဖန်
Category Archives: ဖိုးဖန်
ဖိုးဖန် – မြွေတစ်ကောင်ရဲ့အနမ်း
၁။ မျှော်လင့်တဲ့ည ၂။ ငြီးငွေ့ခြင်းများအကြောင်း ၃။ အီသာ ၄။ အပြန် ၅။ မိုးပြိုတဲ့နေ့ ၆။ ကောင်းကင်ပျောက်သူ ၇။ ဟင်းလင်းပြင်ရဲ့နိဂုံး ၈။ ကလေးဘ၀ကိုအောက်မေ့ခြင်း ၉။ လရောင်ဝေးတဲ့နှင်းဆီ ၁၀။ နယ်ကျွံခြင်း ၁၁။ မြွေတစ်ကောင်ရဲ့အနမ်း ၁၂။ ကျေးဇူး http://www.mediafire.com/?atm1ll3ke18 Pass : axlerose credit to www.mmcybermedia.com
October 7, 2010 swordfish ဖိုးဖန်5Comments
၁. ချစ်သူများရဲ့မနက်ဖြန် ၂. လေလွင့်ခြင်းလမ်းမများ ၃. စကားလုံးမရှိတဲ့ကောင်းကင် ၂ ၄. ကျိုးပြတ်သွားတဲ့တံခါး ၅. တစ်ကယ်လို့များ ၆. မင်းတစ်ယောက်ထဲအတွက် ၇. အလွမ်းရဲ့မီးလျှံများ ၈. မိုးကောင်းကင်အိပ်မက်များ ၉. အချစ်ရဲ့တံခါးခေါက်သံ ၁၀. မင်းလက်ထဲမှာအားလုံးရှိတယ် ၁၁. မီးတောက်ပေါ်ကနေ့ရက်များ ၁၂. တယ်လီဖုန်းနားမှာ ၁၃. ကောင်းကင်ထဲကမြစ်တစ်စင်း
October 3, 2010 swordfish ဖိုးဖန်2Comments
၁။ ပျံသန်းခြင်း – အဲလက်(စ်) ၂။ မတားတော့ဘူး – ရင်ဂို ၃။ လွင့်လွင့်သွားဆဲ – မျိုးကျော့မြိုင် ၄။ သူငယ်ချင်းချစ်သူ – ညီပုလေး ၅။ စကားသစ္စာ – ဖိုးဖန် ၆။ ချစ်သူနားမှာ – ကဗျာဘွဲ့မှုး ၇။ သီချင်းနဲ့အသက် ၈။ အိပ်မက်နတ်သမီး – ကိုစု ၉။ လမင်းလို – အယ်နောင်း ၁၀။ အိပ်မက်လေး – ချစ်စမ်းမောင် ၁၁။ ရည်းစားဦး – ဖိုးဖန် ၁၂။ ရှုံးခဲ့တယ် – ရင်ဂို
November 4, 2008 mmsong ဖိုးဖန် အခွေ (အများ) အဲလက်စ် အယ်နောင်း ရင်ဂို ကဗျာဘွဲ့မှုး ချစ်စမ်းမောင် ညီပုလေး မျိုးကျော့မြိုင် 13 Comments
၁။ ငြိမ်းချမ်းပါစေ – အောင်ရင်+ဘိုဘို+ဖိုးဖန် ၂။ ချိုပေါ့ကျ – ထူးအိမ်သင်+ဖိုးဖန် ၃။ ရူးချင်ယောင်ဆောင်မနေနဲ့ – ထူးအိမ်သင်+အောင်ရင်+ဘိုဘို+ညီပုလေး+ဖိုးဖန် ၄။ ချစ်သူဝေး – ဘိုဘို+ညီပုလေး ၅။ ကိုယ်ချစ်တဲ့လမင်း – ထူးအိမ်သင်+အောင်ရင်+ညီပုလေး ၆။ နေရာချင်းသာလဲလိုက်ချင်တယ်- ထူးအိမ်သင်+ဘိုဘို ၇။ မျက်ကန်းချစ် – အောင်ရင်+ဖိုးဖန် ၈။ အကြောက်ဆုံးပါပဲ – အောင်ရင်+ညီပုလေး ၉။ နွေဝတ်ရုံ – ထူးအိမ်သင်+အောင်ရင်+ဘိုဘို+ညီပုလေး+ဖိုးဖန် ၁၀။ မင်းကိုလွမ်းတဲ့ည -ဘိုဘို+ဖိုးဖန်
September 1, 2008 o2.4tayoke ဘိုဘို ဖိုးဖန် အခွေ (အများ) ထူးအိမ်သင် အောင်ရင် ညီပုလေး5Comments
၁။ ရင်ခုန်သံကျွန်းစုများ – Group ၂။ ချစ်ခြင်းမစ်တာ၏ အရိပ်၌ – ချောစုခင်+ထူးအိမ်သင် ၃။ ကိုယ့်အချစ်က မင်းအတွက်ပေါ့ – ချောစုခင်+ရဲသွင် ၄။ နှစ်ယောက်လမ်း – ချောစုခင်+ဖိုးဖန် ၅။ အားလုံးထဲမှာ မင်းကထူး – ချောစုခင် +ဘိုဘို ၆။ လှိုင်းလား – ချောစုခင်+ချစ်ကောင်း ၇။ အိပ်မက်ချစ်သူ – ချောစုခင်+ထူးအိမ်သင် ၈။ ရွှေနေခြည်ကမ်းခြေ – ချောစုခင်+ဖိုးဖန် ၉။ နှလုံးသားလေးကိုသတိထားပါ – ချောစုခင်+ဘိုဘို ၁၀။ အချစ်တေးတစ်ပုဒ် – ချောစုခင်+ချစ်ကောင်း ၁၁။ မူးပြီ – ချောစုခင်+ရဲသွင် ၁၂။ ရင်ခုန်သံကျွန်းစုများ – Group
February 14, 2008 mmsong ဘိုဘို ဖိုးဖန် အခွေ (အများ) ထူးအိမ်သင် ရဲသွင် ချောစုခင် ချစ်ကောင်း Valentine Albums3Comments
၁။ ဆွဲအားလေး – ထွဏ်းထွဏ်း+သီရိဂျေမောင်မောင် ၂။ တစ်နယ်စီခွဲနိုင်မလား – ဗစ်တာခင်ညို+ မီမီဝင်းဖေ ၃။ အနေချင်ဆုံး – ဟန်ထွန်း + ပိုးရည် ၄။ အချစ်အတိုင်း – ဘိုဘို + သီရိဂျေမောင်မောင် ၅။ အချစ်နဲ့လွတ်ကင်းတာဘယ်သူမှ မရှိ – ဟန်ထွန်း + မီမီဝင်းဖေ ၆။ နွေမှာရွာတဲ့ မိုး – ဒီဥက္ကာ + သီရိဂျေမောင်မောင် ၇။ ပေါင်းစပ်မရတဲ့ အချစ်များ – ဗစ်တာခင်ညို+ မီမီဝင်းဖေ ၈။ နွေရာသီဇာတ်လမ်း – ဟယ်ရီလင်း + မီမီဝင်းဖေ ၉။ နားချင်တယ် – ဖိုးဖန် + ချောစုခင် ၁၀။ အိပ်မက်လေးမဝေးတော့ဘူး … Continue Reading →
February 14, 2008 mmsong ဘိုဘို ဖိုးဖန် ဗစ်တာခင်ညို အခွေ (အများ) ထွဏ်းထွဏ်း ပိုးရည် ချောစုခင် မီမီဝင်းဖေ ဟန်ထွန်း ဟယ်ရီလင်း သီရိဂျေမောင်မောင် Valentine Albums ဒီဥက္ကာ3Comments